Top 3 Ụzọ ndabere iPad ka Mac (Mavericks gụnyere)
Top 3 Ụzọ ndabere iPad on Mac
> Resource> Mac> Top 3 Ụzọ ndabere iPad on Mac
Gị iPad nwere ike ịnwe a akụ na ụba nke ozi nkeonwe gị na-echeta. A na-agụnye ngwa, fim, ozi ịntanetị, na tiivi nakwa na music. Ya mere, ọ dị mkpa na ị ndabere iPad ka Mac. Nke a bụkwa ihe dị mkpa bụrụ na ị na-upgrading gị iPad. Na-esonụ bụ ụfọdụ ụzọ nke ị nwere ike ndabere gị iPad maka nchebe Idebe onwe gị data.
# 1. Ndabere iPad on Mac na iTunes
# 2. Ndabere iPad na iCloud
# 3. Ndabere iPad Media Files na Wondershare TunesGo (Mac)
Nzọụkwụ mbụ ebe a bụ na ị na nkwụnye ahụ iPad gị Mac. iTunes ga-emeghe elu-akpaghị aka. Na iTunes gị iPad ga-egosi na ihuenyo top na sidebar ga-nyeere na panel nke dị na aka-ekpe-(ma ọ bụrụ na-adịghị ahụ ya, pịa View> Gosi sidebar). Dị pịa gị iPad ka Nchịkọta ngwaọrụ gị.
The nchịkọta window ga-enye gị nhọrọ nke akwado gị iPad na iCloud na kọmputa gị. Họrọ "The Computer" wee pịa "Back Up ugbu a." Na windo nke iTunes anya dị ka onye n'okpuru maka iPhone 4.
Ọtụtụ ndị na-ajụ ajụjụ nke otú ndabere iPad ka Mac na iji iCloud. Ọfọn ebe a bụ otú ị pụrụ ime ya. iCloud si Apple enye ụzọ dị iche iche nke ị nwere ike ndabere gị iPad data gụnyere ngwa.
Mbụ, ị nwere ike ma na-akpaghị aka ndabere data, photos, ntọala na akwụkwọ gị iPad ka iCloud na nkwado ndabere na mpaghara mma na. N'ihi na nke a dị gị mkpa nwere iOS 5 ma ọ bụ mgbe e mesịrị na-agba ọsọ.
Iji ndabere gị iPad na iCloud, dị nnọọ aga nhọrọ "Mwube" si ebe gị ga-họrọ "iCloud" na mgbe "Nchekwa na Backups". Mgbe ahụ niile i nwere ime bụ Mia iCloud ndabere na-atụgharị ya.
Cheta na: The nkwarụ na iCloud bụ otu ihe ahụ dị ka ọ na iTunes n'ihi na ọ dịghị-ekpuchi music na ngwa ọdịnala na e zụrụ. Maka ngwa, ị nwere ike ibudata ha ọzọ site na iCloud. The music na e zụrụ site iTunes nwekwara ike ebudatara ọzọ na iCloud. Usoro a Otú ọ dị mgbagwoju anya bụrụ na ị zụrụ music ọzọ karịa si iTunes.
Ụzọ ọzọ na ndabere iPad media faịlụ na Mac bụ site Wondershare TunesGo (Mac). Nke a software bụ nnọọ mfe iji na irè ndabere music, playlist, vidio, na foto, wdg site na iPad ka a Mac. Wondershare TunesGo (Mac), ozugbo aha dị ka Wondershare MobileGo for iOS (Mac), nwere a dịgasị iche iche nke atụmatụ. Esonụ bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ nke a usoro.
Ọ enye gị ohere mfe nyefee music na listi ọkpụkpọ site na gị iPad na gị na iTunes Library on a Mac. Ọ dịghị oyiri na ọ dịghị hassle;
Ọ na-enyere gị aka ndabere music, videos, photos, Pọdkastị, iTunes U, wdg si gị iPad ozugbo na a nchekwa gị Mac;
Ọ na-ahapụ ị mara ihe ọ bụla music na video gị iPad enweghị ihe ọ bụla incompatibility mbipụta;
Ọ bụ kpam kpam dakọtara na iOS 9/8/7 na na ọhụrụ iPad Ikuku na iPad Obere na Retina Gosiputa.
Gbalịa Wondershare TunesGo (Mac) nkwado ndabere na mpaghara gị iPad on Mac ugbu a! Ọ bụrụ na ị nwere a Windows PC, ị ga-agbalị Wondershare TunesGo Windows version.
Best iExplorer Alternative maka iPhone, iPod & iPad
2 Ụzọ ndabere iPad Data ka Mac na OS X Mavericks
Olee ka ihichapụ faịlụ tọrọ X ụbọchị na Windows ma ọ bụ Mac
Olee otú Download na Wụnye iDVD on New Macs (Mavericks na Mountain odum Includ
Folx maka Mac
Manga Studio Ọpụ maka Mac
MacX YouTube Downloader Alternative: Download Online Video na ala
Otú nyefee Music si iPod aka ka iTunes on Mac